by Guest on Thu 10 Jun 2010, 16:38
by Guest on Thu 10 Jun 2010, 16:57
ခဲ့တယ်၊ ကောင်မလေးလည်းကောင်လေးကိုပြန်ချစ်မိတာပေါ့။ နှစ်ယောက်သားအချစ်ကိုရူးရူးမူးမူးကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်လေ။နေ့တွေအားလုံးကလည်းလှပလို့။ပထမဦးဆုံးကောင်လေးရဲ့အနမ်းနဲ့ကောင်မလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းဖျားတို့ထိတွေ့တဲ့အချိန်ခဏအတွင်းမှာဘဲ ကောင်မလေးက "ငါသူ့တစ်ယောက်တည်းကိုဘဲတစ်သက်လုံးချစ်မြတ်နိုးသွားမယ်" လို့
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးဘက်ကသူ့ကိုတစ်ယောက်တည်းပစ်သွားမှာစိတ်ပူတာနဲ့ ကောင်လေးကိုမေးလိုက်တယ်
"နင်ငါ့ကိုဘယ်အချိန်ထိချစ်မှာလဲဟင်?" ကောင်လေးက ကောင်မလေးရဲ့ နှာတံလေးကိုဖွဖွလေးကိုင်လှုပ်ပြီးပြောတယ် "နင်ငါ့ကိုဘယ်အချိန်ထိချစ်စေချင်တာလဲ?" ကောင်မလေးက သေသေချာချာစဉ်းစားပြီး ပြန်ပြောတယ်
ကောင်လေးကရီပြီး "အင်း" ကောင်မလေးကကောင်လေးကိုကြည့်ပြီး "မရဘူး၊
ငါနင့်ကိုမယုံဘူး၊ငါတို့လက်သန်းချိတ်ပြီး ကတိပြုကြမယ်၊ နင်သစ္စာဖောက်လို့ကတော့
ငါနင့်ကိုသတ်ပစ်လိုက်မှာ" ကောင်မလေးကအဲ့လိုပြောတော့ ကောင်လေးကလည်း
သေသေချာချာကတိပေးခဲ့တယ် "တကယ်လို့တစ်နေ့ငါနင့်ကိုသစ္စာဖောက်မိခဲ့ရင် ငါ့ကိုနင်သတ်လိုက်ပါဟာ" ဒါနဲ့ကောင်မလေးလည်းစိတ်ချသွားခဲ့တယ်လေ။ဒီလိုနဲ့ဘဲသူတို့ဟာ ချစ်ကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာ အတူတူထီးတစ်ချောင်းနဲ့
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လည်းရူးရူးမူးမူးကြီးကိုချစ်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကံကြမ္မာကိုဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်ဘူးလေ။ ဆိုးရွားတဲ့ ကံကြမ္မာတွေက အပြန်အလှန်အရမ်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးကို ခွဲခွာပစ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်။ ကောင်လေးဟာ ဘုမသိဘမသိနဲ့
ဆက်ဆံမှုတွေကလည်းအရမ်းကိုအေးစက်လာတယ်။ ဒါကိုကောင်မလေးက ရိပ်မိတာပေါ့။ ဒါနဲ့ကောင်လေးနဲ့ဆုံတိုင်း အမြဲတမ်းတမေးမေးနဲ့ မေးနေခဲ့တယ်၊
ကောင်လေးကလည်းလုံးဝကိုဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။ တစ်ညနေမှာတော့.... ကောင်လေးဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုအိမ်ကိုခေါ်လာတယ်.. အရမ်းကျက်သရေရှိပြီး၊ အရမ်းကိုချောမောလှပတဲ့
မိန်းမတစ်ဦးကိုပေါ့။ ဒါကိုကောင်မလေးက ကိုယ့်ကိုကိုပြန်ညာပြီး သိရက်နဲ့ကို
ကောင်လေးကိုမေးလိုက်တယ်" ဒါနင့်သူငယ်ချင်းလား?" အေးတိအေးစက်နဲ့ကောင်လေးက
ဒါ့ထက်လည်းပိုတယ်..သူကငါ့ချစ်သူဘဲ" ကောင်မလေးကအဲ့စကားကို အသည်းထဲနစ်နေအောင်နာကျင်ရင်း၊ကောင်လေးရှေ့မှာ ဆက်ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်။
ထိုင်နေရာကနေဘယ်မှမထဘဲ..ကောင်လေးမျက်နှာကိုလည်း မော့မကြည့်ရဲခဲ့ဘူး။ သူ့မျက်ရည်တွေ မတားဆီးမထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ ထွက်ကျလာမှာကိုစိုးလို့လေ။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကောင်မလေးက ကောင်လေးကိုယုံနေဆဲ...ချစ်နေဆဲ၊
ကောင်လေးကအေးတိအေးစက်နဲ့ကောင်မလေးကို"ဒီနေ့ညတော့ နင်ဒီမှာဘဲနေလိုက်၊မနက်ဖြန်မနက်စောစော နင်ဒီအိမ်ပေါ်မှာနေစရာမလိုတော့ဘူး၊နင်တခြားနေရာကိုပြောင်းပေး..ဒီညတော့
ငါတို့နှစ်ယောက်ဟိုတယ်မှာသွားအိပ်မယ်ဆိုပြီး တခြားမိန်းမရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးထွက်သွားတယ်" အိမ်တံခါးဝကိုရောက်ခါနီးမှာ ကောင်မလေးက
"ခဏလေး...အစ်မခဏလောက်အပြင်ထွက်သွားပေးနိုင်မလား၊ ကျွန်မသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောချင်တယ်" အဲ့မိန်းမကလည်း ခေါင်းငြိမ့်ပြီးထွက်သွားပေးတယ်။ ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုကျောခိုင်းရင်း
"ဘာကြောင့်လဲ" ကောင်မလေးက သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက တိတ်ဆိတ်မှုကိုပထမဦးဆုံးစကားလုံးနဲ့ ဖြိုခွင်းလိုက်တယ်။ ကောင်လေးက အေးစက်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ "ငါသူ့ကိုချစ်တယ်၊ အကြောင်းပြချက်မလိုဘူး" ကောင်မလေးကိုတစ်ချက်ကလေးတောင်လှည့်မကြည့်ဘဲ ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ကောင်မလေးကိုလည်း
အဲဒီမှာ ကောင်မလေးငိုတယ်၊ အသည်းထဲရင်ထဲထိအောင်နာကျင်လွန်းတဲ့ ချစ်သူရဲ့အေးစက်တဲ့မျက်နှာနဲ့စကားလုံးတွေကို သေလောက်အောင်ကြေကွဲရင်းနဲ့ငိုနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်မလေးက ကိုယ့်ကိုကို ပြန်ပြောပြတယ်"
ဒါပေမဲ့ ကြေကွဲခြင်းမျက်ရည်စက်လေးတွေက အတိုင်းအဆမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ
ကောင်မလေးကကောင်လေးကိုပြန်တွေ့တဲ့နေ့မှာ ဆေးရုံမှာဖြစ်နေတယ်လေ။ အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့တာက ကောင်လေးက
အဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးစဉ်းစားမိတယ် "ဘာဖြစ်လို့ ကောင်လေးက ဆေးရုံရောက်နေရတာလဲ" လို့ပေါ့၊
ကောင်လေးကိုလွမ်းမောရင်း၊တမ်းတရင်း၊စိတ်ပူနေရတာလေ။ ဒါကြောင့်လည်း ကောင်လေးရဲ့အခန်းကိုတိတ်တဆိတ်လိုက်သွားခဲ့တယ်။ အခန်းထဲမှာ " လူနာဟာ သူနဲ့သင့်တော်တဲ့ နှလုံးကိုရှာမတွေ့ရင် ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး၊
အစားထိုးနှလုံးကုသမှုမရှိရင်တော့ သူ့ကိုလက်လွတ်ရမှာပဲ" လို့ဆရာဝန်ပြောနေတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေးဟာ အဲ့အချိန်တခဏမှာဘဲ
ချောက်ခြားသွားတယ်..နောက်..ကောင်မလေးငိုတယ်။ ကောင်မလေးဟာ ထိန်းမရတော့တဲ့
မျက်ရည်စက်တွေကို စိတ်ရှိလက်ရှိ ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေးဟာ
ကောင်လေးအတွက်နောက်တစ်ခါမျက်ရည်ကျရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါက ကောင်လေးအသည်းခွဲသွားတုန်းကထက်ကိုပိုနာကျင်ခံစားရခက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခဏအကြာမှာဘဲ
တစ်ခုခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆရာဝန်ရုံးခန်းကိုသွားပြီး စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာစာလုံးတွေကို ဆေးရောင်ခြယ်ခဲ့တယ်။
နောက်ပြီး.. ကောင်လေးရဲ့နောက်မိန်းမဆိုတဲ့သူဆီကိုဖုန်းဆက်ပြီး "ကျွန်မရှင့်ကိုတစ်ခုတောင်းဆိုချင်လို့... ကျွန်မသူနဲ့တစ်ခေါက်လောက်တွေ့ချင်တယ်"...."ဖြစ်နိုင်မလားဟင်" အဲ့မိန်းမကလည်း "ဖြစ်ပါတယ်..နင်သူ့ကိုဘယ်မှာချိန်းမလို့လဲ ပြောလေ..ငါစီစဉ်ပေးမယ်" ဒါနဲ့ကောင်မလေးကလည်း၊ သူ့ကိုပြောလိုက်ပါ
ဖုန်းချလိုက်တယ်၊ ပြီးတာနဲ့ သူတို့နှစ်ဦးပထမဦးဆုံး
ထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ပန်းခြံထဲကခုံတန်းလျားလေးကို အပြေးအလွှားသွားခဲ့တယ်။ ဖုန်း မက်ဇ့်ဆေ့
ရရချင်း ကောင်လေးလည်း ပန်းခြံကိုအပြေးအလွှားသွားခဲ့တယ်.. ဒါပေမဲ့ သူတို့မတွေ့လိုက်ပါဘူး။ ကောင်မလေးကကောင်လေးကို ပုန်းနေခဲ့လို့ပေါ့။
ကောင်လေးလည်းပြန်သွားခဲ့တယ်၊ ကောင်လေးရဲ့ နောက်ကျောပြင်ကိုကြည့်ရင်း
မျက်ရည်ဝဲနေခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကိုဘယ်သူကမြင်ပြီးသနားမှာတဲ့လဲ။ ကောင်မလေးလည်းငိုရင်း
"ငါဒီလိုမဖြစ်ရဘူး" ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့မျက်ရည်ကိုသုတ်ပြီး ပန်းခြံနောက်ဘက်ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်လေ.......နောက်တစ်ပတ်အကြာမှာ..ကောင်လေးက
ခွဲစိတ်ချက်အောင်မြင်တဲ့အတွက်အူမြူးပြီးပြေးထွက်လာတယ်။ ကောင်လေးလည်း "ငါပထမဦးဆုံးလုပ်မဲ့အလုပ်က ကောင်မလေးကိုရှာမယ်၊ သူ့ကို
ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြမယ်..ပြီးရင် ငါတို့နှစ်ယောက်အရင်လိုဘဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြန်နေကျမယ်" ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပျော်မြူးလို့ပေါ့.ဘေးနားက သူ့အစ်မကလည်းသူ့မောင်လေးကိုကြည့်ပြီး အပြုံးမျက်နှာတွေဝေလို့လေ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ "မောင်လေးရယ်..
လို့ တီးတိုးကျိတ်ပြောရင်း မောင်နှမနှစ်ယောက်ရုံးခန်းကို
ကောင်လေးလည်း အစားထိုးကုသမှုပြီးကတည်းက ကောင်မလေးဆီ ဖုန်းတဆက်ဆက်နဲ့ပေါ့။
သူတို့နှစ်ဦးရုံးခန်းကိုစကားပြောရင်းရောက်သွားတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကောင်လေးကသူ့အစ်မကို "အစ်မသူ
..ကောင်လေးအစ်မက"မဖြစ်နိုင်ပါဘူး မောင်လေးရာ သူနင့်ကိုတော်တော်ချစ်တာ..သူကိစ္စရှိလို့နေမှာပါ ခဏနေမှအစ်မပြန်ဆက်ပေးမယ်လေ
ဟုတ်ပြီလား" အစ်မက မောင်လေးကိုနှစ်သိမ့်ရင်း ဆရာဝန်ကိုကြည့်လိုက်တော့
မင်းအရမ်းကံကောင်းတာပဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်
သူ့ကိုသူသေတော့မယ်ဆိုပြီးငါတို့ကို နှလုံးလှူဖို့လာပြောသွားတယ်၊ မနေ့ကဘဲ
သူဆုံးလို့မင်းအသက်ကို သေမင်းဆီကငါတို့လုနိုင်ခဲ့တာကွ.. ပြီးတော့ အဲ့ကောင်မလေးက
ရော့မင်းပစ္စည်းတွေ" ဆိုပြီးဆရာဝန်က ကောင်မလေးပေးသွားခဲ့တဲ့စာတစ်စောင်နဲ့
သူတို့ချစ်သူစဖြစ်တဲ့နေ့တုန်းက ကောင်လေးပေးခဲ့တဲ့ အနမ်းပွင့်လေးတွေကို
"အမြဲတမ်းလှပနေမဲ့ အနမ်းပွင့်" ဆိုတဲ့စာသားပါတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုလေးရယ်ပေါ့။
ကောင်လေးက ဆရာ အဲ့ကောင်မလေးကဘယ်လိုဆုံးသွားတာလဲ.."ကားမတော်တဆ" တဲ့။ဒါပေမဲ့ အရမ်းနှမြောစရာကောင်းတာဘဲ ကောင်လေးရာ
အရုပ်ကလေးလေးလိုဘဲ ချစ်စရာတော်တော်ကောင်းတာ။ သူ့ပုံစံကြည့်ရတာလည်း
စာအိတ်ကိုဖောက်ပြီး စာရွှက်ကိုတုန်၇ီနေတဲ့လက်နဲ့ ကိုင်လိုက်တယ်၊မျက်ဝန်းတွေ
ပြာဝေနေပြီး၊ ခုန်လွန်းအားကြီးနေတဲ့ နှလုံးတွေကလည်း
စာထဲမှာ " အချစ်ရယ်
ငါတို့မဆုံလိုက်တာဘဲရှိတာပါ..ငါကနင့်အနောက်မှာပဲ.. ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးတွေအားလုံးကိုငါ့နှလုံးသားထဲ
ငါ့စိတ်ထဲမှာ စွဲစွဲကြီးထည့်ထားချင်လို့၊ငါဒီလိုလုပ်ရတာက ငါတို့နှစ်ယောက်နောက်ဘ၀မှာအတူတူနေနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့လေ..ဒီဘ၀မှာ
နင်ဒီဘ၀မှာပျော်အောင်နေရမယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဘ၀မှာငါ့ကိုနင့်ရဲ့ချစ်သူအဖြစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးပါနော်..ဒီဘ၀တော့ ဒီမျှနဲ့ပဲပေါ့။ ချစ်သူရယ် .. အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ...။ကောင်လေးဟာ စာကိုဖတ်ရင်း ရှင်လျက်နဲ့သေနေခဲ့တယ်..မျက်ရည်တွေရေစီးကြောင်းအတိုင်း စီးထွက်လာခဲ့တယ်။ ဆရာဝန်က ကောင်မလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပြရင်း " သူပဲပေါ့ " ။
ချစ်သူရယ် ပြောပါ..ငါ့အမှားပါ၊ ငါမှားတာပါ ငါ့ကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့..အစကတည်းက
ငါနင့်ကိုပြောပြခဲ့ရမှာအားလုံးကငါ့အမှားတွေပါ..အချစ်ရယ် ငါ့ကိုကြည့်ပါဦး..ငါတောင်းပန်ပါတယ် ငါနင့်ကိုအစကတည်းကသစ္စာမဖောက်ခဲ့ပါဘူး၊
ငါနင့်ကိုဘဲအမြဲတမ်းချစ်နေတာပါ..ချစ်သူရယ် ငါမှားပါတယ် ငါ့ဆီကိုပြန်ပြန်လာပါ..ပြန်လာပါ ချစ်သူရယ်.." ကောင်လေးရဲ့ဘေးနားမှာရပ်ပြီး
ကောင်လေးပြောတာတွေကိုကြားနေခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ၀ိညာဉ်ဟာလည်း ကောင်လေးနဲ့ထပ်တူကြေကွဲပြီး တားဆီးမရတဲ့မျက်ရည်စက်လေးတွေနဲ့
ကောင်းကင်ကြီးပြိုလှဲခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုအတွက် ငိုလို့ပေါ့..
ကောင်မလေးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာလည်း ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာက "တကယ်တော့
ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီး ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ဘေးနားကချစ်သူအပေါ်အေးအေးစက်စက်ကြီးမနေဖို့၊ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်နားလည်မှုနဲ့ ထိန်ချန်မှုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စွာလက်တွဲနိုင်ကြပါစေလို့
by bunny on Sat 14 Aug 2010, 19:46
ဆက်ရေးပါအုန်း ညီမလေး ပီတိချို